Mandritra ny hateloana : hanoram-baratra eto Antananarivo | NewsMada
Mandritra ny hateloana : hanoram-baratra eto Antananarivo
Nanambara ny teknisinina mpamantatra ny toetry ny andro omaly, fa hanoram-baratra ny eto Antananarivo sy ny faritra afovoany andrefana mandritra ny hateloana ary hanomboka anio tolakandro izany ary hiitatra hatramin’ny alina. Hanevokevoka koa ny andro satria hiakatra ny maripana ambony indrindra satria ambany ny tsindrin’ny atmosfera saika manerana ny Nosy. Mety hiseho koa ny havandra any amin’ny ilany andrefana, indrindra ny toerana manakaiky tendrombohitra ohatra Ankaratra any Bongolava, hoy ny fanazavana.
Ny ampitso, ny manodidina ny any Mangoro indray no hilatsahan’ny havandra.
Eto Antananarivo, mahatratra 14°C na maripana ambany indrindra ary ho tafakatra 28°C ny maripana ambony indrindra. Mila miomana amin’ny elo sy ny akanjo tsy lena ny rehetra indrindra ny mpitsena mpianatra satria mety hamantana orana izy ireo rehefa tonga ny firavana.
Ahina ny tondradrano ny volana janoary 2018
Momba ny ho fizotran’ny taom-pahavaratra 2017-2018, voatombana ho roa ny fizaran’ny vanim-potoan’ny orana, manomboka ny volana desambra 2017 hatramin’ny febroary taona 2018. Ny tapana faharoa, ny marsa sy avrily 2018. Amin’ny fizarana voalohany, hafana kokoa raha oharina amin’ny mahazatra ny amin’ny afovoan-tany sy ny faritra atsimo ary atsimo andrefana. Hifanaraka amin’ny tokony ho izy na ambony kokoa ny amin’ny faritra sisa. Hanaraka ny tokony ho izy na hangatsiaka kokoa kosa ny marsa sy avrily 2018 amin’ny ilany atsinanan’ny Nosy sy any avaratra. Hanaraka ny tokony ho izy na ambony kokoa ny maripana amin’ny faritra Boeny sy Betsiboka; hihamafana kosa ny amin’ny faritra sisa. Hitondra orana mivatravatra ny Varatraza izay hitsoka matetika manomboka ny faramparan’ny volana janoary 2018. Novinavinaina hiteraka tondradrano izany amin’ny janoary 2018 manerana ny Nosy. Roa ka hatramin’ny efatra kosa ny rivodoza mety hanafosafo na hikasika ny morontsirak’i Madagasikara ary iray na roa amin’izany no hatanjaka. Any amin’ ny volana janoary, febroary ary marsa no mahazo vahana ny fiforonan’ny rivodoza mety hikasika ny Nosintsika.